Kunxuswa amaButho ukuyofihla umGilitsha - Ilanga News
Home Izindaba Kunxuswa amaButho ukuyofihla umGilitsha
KUTHINTE uMnyango wezamaSiko namaCiko KwaZulu-Natal, ukwendela kwelamathongo ngoMsombuluko ntambama kozakhele udumo ngokuhola amabutho esizwe sikaZulu, uMnu Zihogo “Mgilitsha” Nhleko (osesithombeni) waKwaNongoma.
UNgqongqoshe walo mnyango uNkz Hlengiwe Mavimbela, uthi kuningi okufundwe kuMnu Nhleko ngokuhola abantu ikakhulukazi emikhosini ethinta amasiko, abekwenza ngokukhulu ukuzimisela.
“Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo esizweni sonke ngokwenzekile. Ubaba uMgilitsha sibone amagalelo akhe enza umsebenzi wokuhola amabutho ngesikhathi kubuze iSilo uZwelithini kaBhekuzulu.
“Ezikhathini eziningi ngisho uBayede ehambele amazwe aphesheya, ubeba yingxenye yohambo. Sithi uNkulunkulu makabophe isizwe ngebhande likaMoya, ubaba uMgilitsha uyohlale esemicabangweni yethu,” kusho uNkz Mavimbela.
UMnu Nhleko ushonele esibhedlela iBenedictine, KwaNongoma. Kuthiwa ukugula kumqinise ngenxa yokungawadli amaphilisi ayenikwe wona.
UMnu Nhleko, kuthiwa kwatholakala ukuthi uneTB yamathambo, ebikade idale ukuthi ithambo lasehlombe liphelelwe wuqwanga (cartilage), okwenza amathambo agudlane kabuhlungu.
UMnu Seth Nhleko ongumfowabo kaMgilitsha, uthe emasontweni amabili adlule njengengxenye yokwelashwa komfowabo, wanikwa amaphilisi eTB adliwa izinyanga eziwu-6.
“Umfowethu kwathi uma efika ekhaya, wakhala ngokuthi la maphilisi amphatha kabi, wangabe esaqhubeka nokuwadla, kanti usezithintela iziqandu, ukugula kwadloba waphindela esibhedlela isimo sakhe sesisibi kakhulu, eshodelwa nawumoya.
“Wafika esibhedlela bamlekelela ngemishini ukuphefumula,” kusho yena. Ubekade engaphansi kweso lodokotela, okuthiwa bebemgcinile ukuqinisekisa ukuthi amaphilisi uwadla ngendlela.
UMnu Nhleko wahlabeka emuva kancane nje komsindo owasuka ekade ehambe namabutho beyokweseka uMnu Jacob Zuma eNkandla, engakaboshelwa icala lokudelela inkantolo.
Washushiswa yindlunkulu ngalokho, imsola ngokuthi ufaka ubukhosi kwezepolitiki ngokuhola amabutho egqoke imvunulo yesizwe engagunya-ziwe yindlunkulu futhi engabikelanga muntu.
Emuva kwalokho kwahlangana izinduna zasoSuthu, zanquma uku-mhoxisa esikhundleni sokuhola amabutho. Wazama ukuyoshweleza ngenkomo endlunkulu ngokusolwa kwakhe, wajikiswa kwaze kwaba kabili, kwathiwa kusamele ayofundiswa inhlonipho.
UMgilitsha uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngoMgqibelo emzini wakhe oseNhlalangwenya, eSithwe-thweni, KwaNongoma kanti kunxu-swa amabutho ukuba yingxenye yalo mngcwabo.
Previous articleUzosebenzisa isipiliyoni sase-Europe uDolly
Next articleImibuzo kunyamalala owathola umsebenzi “wagula ngengqondo”